တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း
၂၀၂၁-၂၀၂၂ (အောက်တိုဘာလ မှ မတ်လအထိ) (၆)လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၊ လျှပ်စစ် နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ အပူစွမ်းအင်သုံးစက်ရုံများ ဌာန လက်အောက်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် CCTV System ဝယ်ယူရန် MOEE Website မှ ခေါ်ယူထားသော Tender No.13/EPGE/2021-2022(Mini) အား တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီ၏အမည်စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီ၏ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ(၆လ)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ လျှပ်စစ် နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်ရေအား စက်ရုံများဌာနလက်အောက်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် MOEE Website မှ ခေါ်ယူထား သော Tender No . 03 & 04/ EPGE/ 2021-2022(Mini) များအား (၁၆.၁၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ အမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃၅/၂၀၂၁) ဖြင့် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်အရ တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီ၏အမည်စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
၂၀၂၁-၂၀၂၂ (အောက်တိုဘာလမှ မတ်လအထိ) (၆)လ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် MOEE Website မှ ခေါ်ယူထားသော Tender No. 09 (Limited) & 10/ EPGE/ 2021-2022 (Mini) များအား (၁.၁၂.၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ တင်ဒါစိစစ်အတည်ပြုရေးကော်မတီအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄/ ၂၀၂၁-၂၀၂၂) ဖြင့် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်များအရ တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း